अध्ययन तपाईं एक कसरत अघि खान कि बिना वा छैन, शरीर बोसो को नै रकम बल्छ भनेर देखाएका छन्। तथापि, खाली पेट मा व्यायाम, तपाईं आफ्नो शरीर पर्याप्त "इन्धन" दिन छैन एक परिणाम अक्सर तथ्यलाई तिर जान्छ रूपमा बस गहन खेल मा सेना छैन भन्ने।
मञ्चमा यहाँ र विशेष ऊर्जा पेय छोड्नुहोस्। नियमित व्यायाम गर्ने खेलाडीहरूलाई लागि, यो ऊर्जा सजिलो स्रोत, तर पनि एकदम को धीरज स्तर सुधार गर्न कुनै तरिका मात्र छैन। यो एक जादू Elixir जस्तै हो, empowers।
भनिन्छ "पूर्व-कसरत ककटेल" नै लागि बताइएको छ। व्यायाम अघि लिएको हुनुपर्छ जो यस विशेष additives, शारीरिक गतिविधि को तीव्रता वृद्धि गर्न।
यस्तो ऊर्जा वृद्धि कारण यस्तो एमिनो एसिड, creatine, taurine जस्ता घटक, गर्न predominantly हासिल छ।
पूर्व-कसरत पेय, ऊर्जा दिन्छ धीरज। यो भन्दा bodybuilders को एक एकदम लोकप्रिय माध्यम हो।
पूर्व-कसरत पेय, के तपाईं जान्नु आवश्यक
खेल मोड प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत छ, र अर्को लागि के एक लागि काम गर्दछ काम नगर्न सक्छ।
सबै को पहिलो, तपाईं पुरानो रोग छ, विशेष गरी यदि एक विशेषज्ञ परामर्श। तपाईँले किन्न अघि, यी additives को धेरै उदाहरण, कैफीन र contraindications छ कि अन्य पदार्थ लागि समावेश हुन सक्छ मा को रूप मा, संरचना पढ्नुहोस्।
जब तपाईं अन्तमा चयन "आफ्नो" पूर्व-कसरत पेय, हतार छैन। यी सरल नियमहरू पालन:
खाली पेट मा एक ककटेल लिएर प्रयास गर्नुहोस्। यो उनको अन्य उत्पादनहरु र सम्भावित कमजोर प्रभाव को dilution रोक्न हुनेछ।
25-45 मिनेट को लागि एक कसरत अघि पेय लिनुहोस्। त्यसैले तपाईं अधिकतम लाभ प्राप्त।
तपाईं सुत्नेसमय अघि छिट्टै खेती भने, additives को मात्रा सीमित गर्ने प्रयास अन्यथा तपाईं बस सुत्न सक्ने छैनन्।
सही पूर्व-कसरत पेय पत्ता यति र सजिलो छैन। खेल पोषण बजार शाब्दिक परिसर को एक किसिम भरिएको छ। तपाईं ध्यान पक्का हुन चयन गर्दा:
निर्माता को प्रतिष्ठा;
मूल्य र प्याकेजमा सर्विंग्स को संख्या;
निर्माता वेबसाइटमा समीक्षाएँ र फोरम जाँच;
स्वाद, रङ, बनावट;
परिसर प्रयोगकर्ता समीक्षा र मूल्य-प्रदर्शन अनुपात अनुसार, क्षण मा सबै भन्दा राम्रो मानिन्छ, तल वर्णन गरे।
Muscletech द्वारा अराजकता
MuscleTech - लामो कम्पनी को सकारात्मक पक्ष सिद्ध भएको छ। यो नाम संसारभरि ज्ञात छ, आफ्नो उत्पादन को सबै भन्दा सजिलै धेरै, पनि सानो शहर मा खेल पोषण पसलहरुमा पाउन सकिन्छ। पूर्व-कसरत यो निर्माता vivacity र एकाग्रता को एक शुल्क प्रदान गर्नेछ मिलाउ। शक्ति र मांसपेशी बल वृद्धि
पोषण गरेको इष्टतम मानक पूर्व-कसरत को गोल्ड
अधिकतम पोषण, निस्सन्देह, खेल पोषण को क्षेत्र मा सबै भन्दा विश्वसनीय ब्रान्ड हो। सुन मानक पूर्व-कसरत जस्तै कफी सिमी र चिया देखि प्राकृतिक कैफीन रूपमा प्रिमियम सामाग्री प्रयोग गरेको छ।
स्वर्ण मानक पूर्व-कसरत को बेफाइदा को संरचना मा आवश्यक एमिनो एसिड को कमी छ। यद्यपि, यो गुणात्मक व्यायाम समयमा प्रदर्शन सुधार गर्न एकदम एक आर्थिक तरिका हो।
पूर्व-प्रशिक्षण ककटेल विशेषज्ञहरु सूत्र "सबै एक मा" द्वारा अनुमोदित। यो anabolic उत्तेजना र मरिच निकाल्ने सबै सामाग्री को Assimilation को डिग्री बढ्ने लागि BCAAs समावेश गर्दछ। उपयोगी पदार्थ को कुल संख्या therein 13 पुग्यो।
BPI खेल 1.MR भर्टेक्स
कि पम्पिंग दुखाइ को कगार मा महसुस हुनेछ त्यसैले यो जटिल कैफीन को एक ठूलो रकम पनि समावेश छ। 1.MR भर्टेक्स तपाईंलाई बस एक राम्रो कसरत खर्च छैन, तर पनि एक बेलुन जस्तै पट्टी फेंक गर्न सक्षम।
यो एक Bodybuilder, weightlifter, खेलाडी वा बस "एक फिटनेस उत्साही" छन् कि बिना प्रशिक्षण को अर्को स्तर प्राप्त गर्न ठूलो तरिका हो।
धनी पिअना गरेको 5% पोषण मार यो
सारा लाइन सफल Bodybuilder रिच पिअना को brainchild छ कि धेरै वास्तवमा, विश्वास प्रेरित गर्छ। यो सेट पोषक र उत्तेजक को एक ठूलो रकम समावेश गर्दछ। साथै, फल स्वाद को एक किसिम मा उपलब्ध छ।
यो पूर्व-कसरत पेय तपाईं बाहिर पनि 100% र 105% मा सम्पूर्ण कसरत काम गर्न अनुमति दिन्छ
Evlution पोषण देखि ENGN पूर्व कसरत
यो जटिल सबै निर्देशनहरू को खेलाडीहरूलाई लागि डिजाइन गरिएको छ। कम्पनी मालिक पेशेवर बिमएमएक्स मा चाल को प्रदर्शन मा लगी भएको छ। मात्र उपयुक्त weightlifters - यो ककटेल सूत्र छैन धेरै मानिन्छ धनी मध्ये एक छ, तर वास्तविकता त्यो विश्वास गर्ने कारण दिन्छ। ENGN पूर्व कसरत प्रेरणा पाउन कतै बाहिर तपाईंलाई मदत गर्नेछ। यो ककटेल को खपत पनि लैक्टिक एसिड को गठन रोक्छ र रक्त accelerates।
यो जटिल यसको नाम सम्म जीवित। तपाईंलाई, Stevenson गरेको "ड Jekyll र श्री हाइड को अनौठो प्रकरण" द्वारा प्रसिद्ध उपन्यास जस्तै, दोस्रो एकाइ, ऊर्जा, अविश्वसनीय शक्ति र धैर्यको पूर्ण जगाउँछ। किनभने, एक जनावर जस्तै व्यायाम, यो यो ज्यादा र मांसपेशी जल सुरु गर्न सजिलो छ एल-leucine एक भाग, मांसपेशी सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
यो पूर्व-प्रशिक्षण प्रिमियम ककटेल, भिटामिन सी समावेश cortisol र creatine को गठन रोक्छ। C4 50X लागि लामो समय राख्छ, सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, ऊर्जा को एक शक्तिशाली बढावा दिन्छ र। सही समाधान - औसत "स्वास्थ्य उत्साही" को लागि एक बिट महंगा लाग्न सक्छ, तर पेशेवरहरुको लागि।
आठ आश्चर्यजनक स्वाद र अविश्वसनीय शुल्क, सारा दिनको लागि पर्याप्त छ। परिसर कैफीन, कोको र guarana निकाल्ने मा - तपाईं साँझ अभ्यास भने सावधान रहनुहोस्। सबै Betancourt Bullnox Androrush यो - पम्पिंग, बल र धीरज मा एक असाधारण वृद्धि, साथै अन्य धेरै फाइदा।
पारदर्शी ल्याब PreSeries थोक
धेरै पेशेवर bodybuilders प्रयोग खेल को यो ककटेल, दुबला मांसपेशिहरु निर्माण गर्न खेलाडीहरूलाई। बिटा-एलानाइन, Bcaa, taurine, choline, कैफीन - सामान्य खातामा 20 पोषक पारदर्शी प्रयोगशाला सिद्ध पूर्व-कसरत हल्लाउने सिर्जना कम्पनी सक्षम भयो। खेल संसार rejoices। उत्पादन अपेक्षाकृत नयाँ छ, तर पहिले नै सकारात्मक समीक्षा धेरै प्राप्त गरेको छ। सायद कारण कम्पनी सरल सूत्रहरू र प्रभावकारी सामाग्री प्रयोग गरेर कम से कम प्रतिरोध को बाटो लिन निर्णय भन्ने तथ्यलाई गर्न।
अब तपाईं जो थाहा पूर्व-कसरत सुविधाहरु खरिद हुनुपर्छ। सम्झना, तर, कुनै पनि रोगको वा एलर्जी लक्षण लागि तुरुन्तै मिश्रण प्रयोग टुटाउन र सल्लाह को लागि एक विशेषज्ञ परामर्श गर्न पर्छ भनेर।
खेल पछि पिउने। रक्सी र खेल: मिथक र वास्तविकता
Lyumila Goshko: म छोटो peptides5वर्ष प्रयोग गर्दैछु, र तिनीहरूलाई धन्यवाद म स्टेरयड औषध गर्न Resort छैन
को बाइसेप र triceps। घर मा बाइसेप र triceps कसरी निर्माण गर्ने?
Aleksey Lesukov - प्रतिज्ञा गर्नुभएको रूसी Bodybuilder
साराटोभ सर्कस तिनीहरूलाई। भाइहरूलाई Nikitin: विवरण, इतिहास र समीक्षा
के काम उच्चतम वेतन तिर्नुपर्छ? तर्क तीव्र विषय
कम्पनी "Velesstroy" - समीक्षा। "Velesstroy": कर्मचारी समीक्षा